202205 / 23(Month)
Citizen's PlazaAplicoAla ara-kolontsaina
[Zava-dehibe] Momba ny fampiasana trano kolontsaina hisorohana ny fihanaky ny otrikaretina coronavirus vaovao taorian'ny 5 Mey
Jereo ny fampisehoana
Ankafizo ao an-trano
Ankafizo MUSIC! ~ Mozika ~
Ankafizo ART! ~ Art ~
Ankafizo ny horonan-tsary! ~ Movie ~
Ankafizo ny kolontsaina TRADITIONAL! ~ Zavakanto fampisehoana nentindrazana ~
Ankafizo ny Fialam-boly! ~ Rakugo ~
Ankafizo LITERATURE! ~ Haisoratra ~
Ankafizo ny tranombakoka! ~ Efitrano fahatsiarovana ~
2022 taona 7-bolana
Fampisehoana / hetsika vao haingana
2022 07 / 02(tany)
Sodina sy bassoon & harpa Feo mamelombelona mandoko ny fahavaratra
Fampisehoana natolotry ny Ota Bunkanomori Management Council
2022 07 / 03(Day)
Atsaharo ny hosoka manokana! !!Ianaro ny fika sy fika tsy ho voafitaka!
2022 07 / 06(Rano)
Atrikasa Dihy Folk Dance Group Yamato Dance
Miaraka amin'ny firariantsoa ho an'ireo kintana ★ Tanabata Classic Live
2022 07 / 07(Hazo)
Dance Sky Free Tokyo Sky
Start 13:00 Faran'ny 16:00
2022 07 / 09(tany)
2022 07 / 13(Rano)
2022 07 / 20(Rano)
Ankafizo ireo teny any anaty ala
2022 07 / 21(Hazo)
2022 07 / 27(Rano)
2022 07 / 28(Hazo)
Sarimihetsika Ankizy Summer Waku Waku "Ny Sarimihetsika Moomin Valley Comet Puppet Animation (Dikan-teny nomena anarana)"
Rakugo ho an'ny ankizy mandritra ny vakansy fahavaratra
2022 08 / 04(Hazo)
2022 08 / 07(Day)
14:30 manomboka (14:00 fanokafana, fandraisana manomboka 13:30)
Navoaka ny taratasy fampahalalana momba ny kolontsaina any Ota Ward "ART bee HIVE" vol.11.
Taratasy fampahalalam-baovao "ART bee HIVE" dia teraka ny toetran'ny PR ofisialy!
Efa misy ny Twitter ofisialin'ny taratasy fampahalalam-baovao "ART bee HIVE"!
Lahateny Ala ara-kolontsaina
Fandraisana ankizy seho an-tsehatra Tokyo!
Recruitment Ala ara-kolontsaina
Filankevitra momba ny ala momba ny ala any Daejeon
Nanangana filankevi-pitantanana izahay hanohana ny hetsika ara-kolontsain'ny mponina ary hanaparitaka ny kolontsaina.